ဘယ်လ်ဂျီယံတွင်ဓာတုပစ္စည်းဖြင့်တင်ထားသောရထားမီးလောင်သွားသည် (ဗီဒီယို) | RayHaber | raillynews
ပင်မစာမျက်နှာလောကဥရောပ32 ဘယ်လ်ဂျီယံဘယ်လ်ဂျီယံမီးရှို့ဓာတု-ဝန်ကိုထမ်းရွက်ရထား (ဗီဒီယို)
06 / 05 / 2013 32 ဘယ်လ်ဂျီယံ, ဥရောပ, ခရီးဝေးရထားစနစ်များ, လောက, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, ခေါင်းစီးသတင်း, VIDEOS
1 33 သေဆုံးသူနှင့်အခြားသူများဒဏ်ရာရရှိဓာတု-ဝန်ကိုထမ်းရွက်ရထားပို့ဆောင်ရေးစဉ်အတွင်းပေါက်ကွဲမှုအတွက်မီးတောက်များအတွက်မြို့ယူပြီး၏ရလဒ်အဖြစ်ဖြစ်ပေါ်ဘယ်လ်ဂျီယံ Wetteren ။ အရာရှိများကအဖြစ်အပျက်သုတေသနဖြစ်ပေါ်ကြောင်းကိုမတှေ့နိုငျဘယ်လောက်သေးဆက်လက်ခံခဲ့ရသည်ဟုဆိုသည်။
အဖြစ်ကောင်းစွာနယ်သာလန်နိုင်ငံဖြစ်ပေါ်ဖြစ်ရပ်များ 02.30 ဒေသစံတော်ချိန်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ထံမှကားများ၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစဉ်အတွင်း။ အဖြစ်အပျက်ပြီးနောက်မတော်တဆဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့ပစ္စည်းပြန်လည်ထူထောင်စက်လုပ်သမား recover လုပ်ဖို့ဂျာမန်အာဏာပိုင်များတင်ဆောင်လာသောကုန်တင်ရထား၏ဒတျချြအင်ဂျင်နီယာ, ထိုဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုနှင့်အတူသူကပြောပါတယ်။
အဆိုပါဖြစ်ရပ်များနှင့်တာဝန်ရှိသူများစဉ်အတွင်းအသက်ဆုံးရှုံးကြောင်း 1 လူတွေ 30 လူတွေကိုအဆိပ်ထက်ပိုပြီးကပြောသည်။ ဘယ်လဂျီယံမီးရထားအာဏာပိုင် Infrabell Sözcü့သောမတ်စ် Baek မှာအဖြစ်အပျက်နှင့် ပတ်သက်. ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ညွှန်ကြားမှု2ဒတျချြဘယ်လ်ဂျီယံရေထဲမှာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဓာတုပစ္စည်းအဆိုပါသံလမ်းရိုက်ယူခြင်းပေါက်ကွဲမှုနှင့်မီးစေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကုန်တင်ရထားမှာနောက်ဆုံးညဥ့် "ဟုပြောသည် သူတို့ကချက်ချင်းကြားဝင်နှင့်ထိန်းချုပ်မှုလူတိုင်းအောက်မှာအခွအေနအရသူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးလုပ်ခဲ့တယ်ဖို့လိုအပျပေါငျးတို့သသောအရပ်တို့ကိုမ။
လောလောဆယျပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအကဲဖြတ်အစီရင်ခံစာနှင့်လိုအပ်သောလျှင်ဧရိယာ၌ဖြန့်ရပြီစေခြင်းငှါဓာတုဓာတ်ငွေ့အဆင့်အထိတိုင်းတာခြင်းလုပ်ပါ။ အကြောင်းကိုဘယ်လိုဘယ်ကြောင့်မတော်တဆထိခိုက်မှုကြောင့်စောလွန်းဖြစ်ပါတယ်နှင့်ဤကိစ္စသို့အသေးစိတ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုဆက်လက်ဤအဆင့်မှာတစ်ခုခုပြောရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၏ရလဒ်ကိုစောင့်ဆိုင်းရန်ရှိသည်။ ဒီတော့ဝေး, ငါတို့သာလူသားတစ်ဦးဆုံးရှုံးခြင်းရှိသည်, သို့သော်၎င်း၏လည်းမရှိသေးပါဒီဆက်စပ်မတော်တဆမှုဖြစ်ပြီးအတိအကျဟုတ်မဟုတ်မသိရပါဘူး။ ဒါဟာအကျိုးအမြတ်ဟာသူတို့ရဲ့အသက်ဆုံးရှုံး, ဒါပေမယ့်ငါသည်လည်းဓာတုဓာတ်ငွေ့ဒီစုံစမ်းစစ်ဆေးမှု Is အဖြစ်၏သေဆုံးမှုအတွက်သက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်ရှိရာအချက်ရန်အလွန်နီးကပ်နထေိုငျသောကာသက်ကြီးရွယ်အိုပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအဖြစ်အပျက်၏ဤအဆင့်မှာနိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးပတ်ဝန်းကျင် 500 မီတာစက်ဝိုင်းခဲ့ကြသည်။ လမ်းသွားလမ်းလာများနှင့်မော်တော်ယာဉ်များသွားခွင့်မပြုနေကြတယ် "ဟုသူကပြောသည်။
မျက်မြင်သက်သေများ၏ဖော်ပြချက်ထဲတွင် Hubert Gillis "ဟု The အဖြစ်အပျက်ငါ့အိပ်ရာထဲမှာအိပ်ပျော်ခဲ့တဲ့နဲ့ကျွန်မအနေနဲ့ချက်ချင်းကြီးတစ်ခုပေါက်ကွဲမှုအသံနှင့်နှိုး။ ငါထသောအခါငါသောမီးရထားသံလမ်းထဲကကိုကြည့်မြင်တော်မူ၏။ မီးတောက်ပြီးနောက်မိနစ်ရထားပုဒ်ထဲကမြင့်တက်စတင်ခဲ့ပြီးမီးကြီးပွားသတည်း။ သူ့ကိုစမိနစ်အနည်းငယ်အကြာတွင်နှစ်ခုထက်ပိုသောကြီးမားသောပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားလာ၏။ ဝေးလံခေါင်ဖျားကိုတောင်ငါကိုအလွယ်တကူကြည့်ရှုနိုင်သော်လည်းမီးလျှံများနှင့်အနက်ရောင်မီးခိုးကိုမြင်လျှင်။ 1 33 အဆိုအရသေဆုံး, ဒဏ်ရာရဤနေရာတွင်ပြောပြီဒါပေမဲ့သူတို့နေဆဲကွယ်လွန်သူ၏သေမင်း၏အကြောင်းရင်းအားစုံစမ်းစစ်ဆေးနေကြသည်။ ကျွန်တော်ဒဏ်ရာရသည့် 33 နေဖြင့်ပထမဦးဆုံးဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုကိုသိသောအသင်းအဖွဲ့ဝင်များကိုကယ်နှုတ်သောအရာ။ ငါသူတို့ဓာတုပစ္စည်းကနေအဆိပ်သင့်နေကြတယ်ထင်ပါတယ်။
သင်တို့သိကြသည်, ဒီခရီးသည်တင်ရထားနှင့်ကုန်တင်ရထားမဟုတျပါဘူးတဲ့ဒတ်ခ်ျအင်ဂျင်နီယာရထားအသုံးပြုနေသည်နှင့်အချိန်ကယ်ဆယ်ရေးများကရထားကနေဖယ်ရှားခံရဖို့ဆိုပါတယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ မိမိအသက်တာကိုဆုံးရှုံးနိုင်သည်အလွန်ကံကောင်းခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကဒီမှာဂျာမန်ရထားကြား၏။ သူကပစ္စည်း၏ကြီးမားသောဂျာမန်ဓာတုစက်ရုံများသယ်ဆောင်ခဲ့သည် "ဟု၎င်းကပြောသည်။ အဆိုပါအဖြစ်အပျက် Femke Mertens မှနောက်ထပ်သက်သေ "ငါသည်ညဥ့်အခါငါ့အပြတင်းပေါက်ကနေမီးတောက်နှင့်မီးခိုးကိုမြင်တော်မူ၏။ တစ်ဦးကအလွန်ကြီးမားတဲ့မီးဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ အများအပြားလူနာတင်, မီးအင်ဂျင်နှင့်ရဲယာဉ်များအဖြစ်ညဥ့်3ဝနျးကငျြလာမယ့်ကြောင်းသိမြင်ကြပြီ။ လောလောဆယ်ကျနော်တို့မရှိတော့လုံခြုံခံစားရတယ်။ သူတို့ကဒီဖြစ်ရပ်နှင့် ပတ်သက်. စကားပြောနေကြသည်ခါတိုင်းလိုအဖြစ်ယနေ့တွင်ငါ၏အ clients များရှိသမျှတို့ကိုငါတစ်နေ့ငါ့အကော်ဖီဖွင့်လှစ်။ လူတိုင်းပြီးသားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအဖြစ်အပျက်များ၏ဒီနေရာမှာရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ ဂျော့ဘ်သင်နားလည်ကြလိမ့်မည်ဖွင့်လှစ် "ဟု၎င်းကပြောသည်။
ကိုမီးရှို့မြှုပ် Installed TR
ဘယ်လ်ဂျီယံအတွက်မီးရထားပျက်ကျမှု၏အကြောင်းရင်းမှာလျှပ်စစ်ရထားလမ်း (ဗီဒီယို) ဖြစ်နိုင်ပါသည်
အင်ဒိုနီးရှား LPG ခုနှစ်တွင်ရေနံတင်သင်္ဘောတင်ဆောင်ခရီးသည်ရထားသေလွန်သောသူတို့သည် (ဗီဒီယို) ရှိကြ၏2သို့ဆော
အဆိုပါ TMO ဆိပ်ခံတံတားရေနံတင်သင်္ဘောစက်ခေါင်း (ဗီဒီယို) နှင့်အတူကွဲသွားရင်ထံမှထွက်
müteahhidကိုမီးရှို့သောဂူဗိမာန်အတွင်း YHT မျှဆောက်လုပ်ရေးအလုပ် (ဗီဒီယို)
မီးရှို့ရာ Wagon (ဗီဒီယို) သန်းပိုသယ်ဆောင်ရုရှားနိုင်ငံ 50 အတွက်ရေနံထွက်ပစ္စည်းများ
ရထားပေါ်တွင် Mus တစ်မီနီဘတ်စ်ဝန်ကိုထမ်းရွက်ကြက်သားဝင်တိုက်ခဲ့သည်
စောင့်ဆိုင်းန်ထမ်းပို့ဆောင်ရေးဘူတာ Wagon Pamukova အတွက် (ဗီဒီယို) ကိုမီးရှို့
Haydarpaşaဘူတာ Wagon (ဗီဒီယို) ကိုမီးရှို့